Somali > Macluumaad caafimaad > Colon rectal screening
Sida tubaakadu u saameyso Ilmaha yaryar iyo caruurta
Kaansarka mindhicirka iyo malawadka (colorectal cancer) waa kaansar ka bilaabma mindhicirka ama malawadka. Waxay tahay sababta ugu weyn ee keenta geeri kaansar oo ku dhacda ragga iyo haweenka gudaha Maraykanka, inkasta oo xaqiiqo ahaan ay ka mid tahay noocyada kaansar ee laga hortagi karo inta ugu badan.
Kaansarka mindhicirka iyo malawadka waxay daweyntu sida ugu fiican wax uga tartaa marka goor hore la helo ee loo daweeyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogal ah. Waxa aad door firfircoon ka qaadan kartaa hore u ogaanshaha inta aad bixiyahaaga daryeelka caafimaadka kala hadashid ikhtiyaaradda baadhis ee ku yaala dhabarka kaadhkan marka haddii da’daadu tahay 50 ama ka weyn. U hubso sidoo kale inaad bixiyahaaga caymiska ama inshuuraniska weydiisid waxa qorshahaagu caymisku daboolayo kharashkooda ama aanuu daboolayn.
Talooyinka soo socda waxay horumarin karaan caafimaadka mindhicirka iyo malawadka.
Diiwaan ku qor kaansarada ama burooyinka laga helo waalidkaaga ama walaalahaa.
Cun cunto uu ku yar yahay dufanku oo uu ku sareeyo dufku ama buushuhu (fiber).
Cun furuut, khudaar iyo xabuub kaamil ah oo badan.
Mindhicir fiirin (Colonoscopy)
Tuubo jilicsan oo leh kamerad yar ayaa la galinayaa malawadkaaga oo la sii dhex marinayaa dhammaan xiidmahaaga ama mindhicirkaaga. $$$ 10 sanno kasta
Waxa la fiiriyaa dhammaan mindhicirka.
Haddii la helo buro, isla markiiba waa la jari karaa.
Waxa aad u baahan doontaa inaad nadiif ka dhigtid mindhicirkaaga ka hor baadhitaanka.
Waxa laguu sameyn doonaa suuxin khafiif ah waxana aad u baahan doontaa qof guriga baabuurka kugu geeya ka dib baadhitaanka.
Tuubo jilicsan ku baadhista xiidmaha (Flexible sigmoidoscopy)
Tuubo jilicsan oo leh iftiin yar ayaa la galinayaa malawadkaaga oo la sii dhex marinayaa xiidmahaaga hoose. $$ shan sanno kasta
Laguma suuxin doono sidaa daraadeed baabuur baad guriga isku geyn kartaa ka dib baadhista.
Waxa lagu fiiriyaa kaliya qaybta hoose ee mindhicirka. Waa uu gafi doonaa burooyinka haddii ay ka jiraan qaybta sare ee mindhicirka.
Waxa aad u baahan doontaa inaad nadiifisid xiidmahaaga ka hor baadhista.
Waxa laga yaabaa inaad yeelatid xoogaa ah raaxo-daro.
Haddii natiijooyinku fiican yihiin, waxa aad u baahan doontaa mindhicir fiirin (colonoscopy).
Kan waa baadhis shaybaadh oo lagu helo dhiig qarsoon oo ku jira saxarada. $ Sannad kasta
Saxarada waxa lagu soo ururiyaa guriga
Uma baahnid inaad qaadatid cunto gaar ah.
Uma baahnid inaad nadiif ka dhigtid mindhicirkaaga.
Ma heli doonto dhammaan burooyinka iyo kaansarada qaarkood.
Source: Allina Health's Patient Education Department, Kaansarka Mindhicirka iyo Malawadka (Colorectal Cancer), can-somali-ah-15433
Tilmaamaha shaybaarka uruuriyo
Sida loo ururiyo saambal ama qayb saxaro